राउटेलाई चुम्बन गर्ने रेखाले राउटे महिलामाथि भएको पीडामा किन बोलिनन् ? | समाचार
June 11, 2021 NepstokLeaveaComment on राउटेलाई चुम्बन गर्ने रेखाले राउटे महिलामाथि भएको पीडामा किन बोलिनन् ?
नायिका रेखा थापाले सुर्खेतमा राउटे समुदायबिच राहत बाँड्ने क्रममा एक पुरुष राउटेलाई चुम्बन गरिन् । उक्त तस्बिर सामाजिक संजालमा निकै चर्चामा आयो । रेखाले राउटेलाई चुम्बन गरेपछि राउटेहरु रेखासँग रिसाएको खबरहरु पनि आए । जवाफमा रेखाले आफूहरुलाई राउटे समुदायले निकै माया गरेको र उनीहरुको कुल पुजामा समेत आफूलाई समावेश गरेको भन्दै राउटेहरु नरिसाएको बताइन् । यता, रेखाले दिएको चामल र नगद समेत राउटेले रिसाएर लिन नमानेको खबर आएको थियो । बाहिरको महिला, पुरुषले वा राउटेहरुमध्यकै महिला, पुरुषले आफ्नो समुदाय भन्दा बाहिरका मानिसहरुसँग नजिकिएर चुम्बन जस्ता कार्य गर्नु उनीहरुको रितिरिवाजले दिदैँन । जे होस्, रेखाले चुम्बन गरेर उनीहरुप्रतिको माया देखाइन् । तर, ७ वर्ष अघिको त्यो माया देखावटि थियो कि वास्तविक भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । रेखा र राउटेबिच के भएको थियो, भिडियो समाचारको अन्तिममा छ ।
अहिले सामाजिक संजाल लगायत संचारमाध्यममा राउटे समुदायका सदस्यमाथि भएको एक घट्नामा रेखा मौन बसेकि छिन् । सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका–११ आँपसोती जनैघाटमा बस्दै आएका राउटे समुदायका दुई युवतीमाथि स्थानीय तीन युवाहरूले यौन दुव्र्यवहार गरेको घट्ना भाइरल भइरहेको छ । उनीहरूले दुव्र्यवहार मात्रै गरेनन्, ती युवतीमाथि यौन शोषण गरेको भिडियोसमेत बनाएर सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गरे । युवतीहरूलाई मदिरा सेवन गराएर होटलमा लगि यौन दुव्र्यवहार गरेको भिडियो भाइरल भएको भोलिपल्ट आइतबार प्रहरीले गुर्भाकोटस्थित मेहेलकुना होटलका सञ्चालक २९ वर्षीय विनोद पुन, गुर्भाकोट–९ का ३५ वर्षीय दमनबहादुर घर्ती र २४ वर्षीय भूपेन्द्र बुढालाई पक्राउ गरेको छ । राउटे महिलाहरुको ज्याननै जाखिम रहेको समेत मानवअधिकार आयोगले बताइरहेको छ । रेखा भने यी सबै विषयमा चुपचाप देखिएकि छिन् । उनी एक नायिका हुन् । उनले आवाज उठाउनैपर्छ भन्ने पनि छैन । राज्यको सम्बन्धित अंगले यसको अनुसन्धान र यसबाट सिर्जित समस्याको समाधान गर्नेनैछ । तर, जुन तरिकाले सात वर्षअघि राउटेलाई अंगाल्दै चुम्बन गर्ने रेखाले अहिले भने केहि नबोल्दा देखावटि रुपको संकेत देखिएको छ ।
अहिले समग्र राउटे समुदाय पिडामा छ । पिडक प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् । उनीहरुलाई आवश्यक कार्वाही हुनेनै छ र हुनैपर्छ । तर, रेखाले यी सबै परिवेशलाई मध्यनजर गरेर राउटे समुदायको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्ने थियो । किनभने, राउटेहरु त्यहि हुन् जसले रेखालाई कुल पुजामा समेत समावेश गरेका थिए । रेखाले राउटे महिलामाथि भएको यौनहिंसाका बारेमा न त मिडियामा बोलेकि छिन् न त सामाजिक संजालमा नै । रेखाको देखावटि चरित्र भन्दै केहि दर्शकले गुनासो गरेका छन् । रेखालाई राउटेको माया भएकै भए आज राउटेको पीडामा उनीहरुलाई साथ र सहयोग गर्नतर्फ केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । जे होस्, राउट महिलालाई कुनै पनि तनाब हुन नदिन सम्बन्धित पक्षले अग्रसरता देखाउन आवश्यक छ ।
रेखाले चुम्बन गरेपछि फेसबुकमा यस्तो लेखेकि थिइन्: ‘राउटेको आँगनमा पुगेँ, तब मेरो शरीरमा एक प्रकारको ऊत्साह पैदा भयो । फाउन्डेशनको सुरुवात अवस्थामा जुन मेरो सोचाई र बुझाई थियो, तर जब मैले प्रत्यक्ष देखेँ र बुझेँ मैले सुनेको भन्दा घेरै फरक पाएँ । म २१औँ शताब्दीको एउटा विकसित मानव र २१ औँ शताब्दीकै र सुर्खेत शहरको छेउमै रहेर पनि अविकसित मानव जातिबीचको आकाश र धर्ती बिचको जस्तै लाग्ने त्यों अतुलनिय भिन्नता देख्दा मेरो मन भित्री ह्रदय देखीनै रोएर आयो। फाऊण्डेशन को सुरूवाती अवस्थामा राउटे जातीको उत्थानको लागी म केही योगदान गर्छु भन्ने मनमा चाहना मात्र थियो भने हिजोवाट यो मेरो सपना संकल्पमा परिणत भएको छ ।
यो मेरो भाग्य मान्नुपर्छ जुनदिन म राउटे जातीको वस्तीमा छिरेकी थिएँ सोहीदिन संयोगले उहाँहरूको कुलपूजा गर्ने दिन रहेछ । पहिला त मेरो फाउन्डेशनका सदस्यलाई उक्त वस्तीमा प्रवेश गर्न वाट बञ्चित गरिएछ । म उक्त स्थानमा पुग्ना साथ म लगायतको टीमलाई दैवि शक्तिले बवरदान दिए झैँ लाग्ने गरी उहाँहरुको बस्तीमा सम्मान सहित छिर्ने अवसर मिल्यो । उहाँहरूको पुजा हेर्न लाई सालदेखी प्रतिक्षारत गाउँलेलाई पनि प्रवेश नदिई मलाई त्यो अवसर दिएकोमा स्थानियहरु पनि चकित भएको कुरा थाहा पाउँदा म छक्क परेँ। यो पल मेरो जीवनकै उपलब्धि भएको कुरा मैले महसुश गरेकी छु । अझ सुखद कुरा त के भने, हरेक वर्ष मनाईने ऊहाँहरुको कुल पुजा भएकै दिन मेरो फाउन्डेसनले प्रवेश पाउनु राम्रो हुने सुरुवातको संकेत हो भन्ने मैले ठानेकी छु ।
राउटे समूह को दयनिय अवस्थाको समाधान बुझ्ने क्रममा अनायासै म मा के भावना उत्पन्न भएर आयो र मैले मेरो नजिक उभिरहनु भएका राउटे दाईलाई उहाँको गालामा माया र सम्मानको किस गरेँ र त्यो किन गरे म त्यो शब्द मा लेख्न सक्दिन, जो मानिससँग त्यो भावना बुझ्न सक्ने मन छ उसलाई मैले बुझाई रहनु पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ । अझै मलाई उहाहरुले राउटे समूह को छोरि र सदस्य बनाएर जुन माया र सम्मान दिएको मा म आफुलाई धेरैनै भाग्यवानी मानिस रहेछु भन्ने महसुश भएको छ । हिजो को दिनबाट मैले सुदुरपश्चिममा मेरो नयाँ परिवार पाएकी छु । मेरो बा, आमा, दाजु, भाइ, दिदि, बहिनिहरु र त्यो मेरो परिवार लाई अब कसरी राम्रो गर्ने भन्ने मेरो जीवनको अति नै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो र त्यो म पूर्णरुपमा अन्तरआत्मा बाट पुरा गर्ने छु ।
अन्त्यमा रोचक कुरा त के छ भने, एउटा राउटे दाईले त मलाई चिन्ने पो रहेछ भन्या !! उहाँले मेरो फिल्म सुर्खेतमा गएर हेर्नु भएको थियो रे तर फिल्म को नाम चाहीँ भुल्नु भएछ र पनि म त्यो पल धरै नै खुसि भए र म कलाकार भएको मा निकै गर्भ महसुश भएर आयो। मेरा लाखौ शुभचिन्तकहरु मध्ये त्यो राउटे दाई आज मेरो लागी करोडौ शुभचिन्तकहरु बराबर थिए । अन्तमा ‘झिम झिम सानु नझिम्काउ परेली भुतुक्कै हुन्छु म’ बोलको गीत उहाँहरुले गाउनु भयो र हामी सबै परिवारसँगै नाचेर फेरि चाँडै भेट्ने र वाचा का साथ आएका छौँ ।’
May 8, 2021 Nepstok